नेपालमा एमसीसीको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला नयाँ तरिकाबाट एमसीसी पास गर्ने भन्दैं युवराज खतिवडा अमेरिकाबाटै उत्रिए मैदानमा ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
नेपालमा एमसीसीको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला नयाँ तरिकाबाट एमसीसी पास गर्ने भन्दैं युवराज खतिवडा अमेरिकाबाटै उत्रिए मैदानमा !
नेपालमा एमसीसीको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला नयाा तरिकाबाट एमसीसी पास गर्ने भन्दैं अमेरिकाबाटै मैदानमा उत्रिएका छन् । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले एमसीसीका अनुमोदनका लागि वैकल्पिक तरिका खोजी गरिने बताएका हुन्।
राजदूत खतिवडाले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दक्षिण र मध्य एसियाली मामिला विभागकी उपसहायक सचिव लौरा स्टोनसँगको भेटका क्रममा एमसीसी सम्झौताको वैकल्पिक तरिका खोजी गरिनेमा आफू आशावादी भएको बताएका छन्।
एमसीसीका अधिकारीको नेपाल भ्रमणको एक साताअघि भएको स्टोनसँगको भेटमा नेपालमा सरकार परिवर्तन भए पनि विदेश नीतिमा परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
उनले भने, सरकारको परिवर्तनको बावजुद नेपालको आधारभूत परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन हुँदैन। नेपाल अमेरिकासँग लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण र सहकार्यको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छ। उनले नेपाल सरकार एमसीसी कम्प्याक्टलाई मैत्रीपूर्ण र सहकार्य सम्बन्धको समान भावनाका साथ अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताएका छन्।
उनले भने, एमसीसीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणले कम्प्याक्टको बारेमा रहेका शंकाहरु र भ्रमहरुलाई हटाउँदै परियोजनालाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोगी हुनेछ। दुबै पक्ष सहमत भएमा कम्प्याक्टको पुनस् समीक्षा वा अनुमोदनको वैकल्पिक तरिका खोज्‍न सहयोगी हुनेमा विश्‍वास व्यक्त गर्दछु।उपसहायक सचिव स्टोनले राजदूत खतिवडासँग एमसीसीको नेपाल भ्रमणका क्रममा हुनसक्‍ने सुरक्षा खतराबाट जोगिने सुनिश्‍चितताबारे प्रश्‍न गरेकी थिइन्।
उनले नेपाल सरकारलाई एमसीएका स्टाफ र पत्रकारहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कम्प्याक्टका विषयमा फैलिएका गलत सूचनाको अभियान रोक्न आग्रह गरेकी हुन्।